Chelsea oo iska hilmaamaysa Thibaut Courtois, xilli ay u jihaysatay Alisson Becker - Jubbaland TV
Chelsea oo iska hilmaamaysa Thibaut Courtois, xilli ay u jihaysatay Alisson Becker
By admin May 31, 2018 192
Sida saaka lagu daabacay Jariirada Sky Sport Italia’ Kooxda Kubada Cagta ee Chelsea ayaa dalab ka gudbin doonta goolhayaha Kooxda AS Roma Alisson Becker.
Alisson ayaa noqday mid ka mid ah goolhayayaasha ugu fiican adduunka tan iyo xilli ciyaareedkii dhamaaday, kaddib markii uu Kooxdiisa ka caawiyay in ay gaarto Sama Fiinaalaha tartanka Champions League iyo si la mid ah in Kooxda ay ku dhamaysato booska sedexaad ee Serie A.
Qaab ciyaareedka goolhaye Alisson ayaa soo jiitay indhaha qaar ka mid ah Kooxaha qaarada Yurub, sida Liverpool, PSG iyo Real Madrid.
Sky Sport Italia ayaa soo warisay in Chelsea ay dalab u dirtay Alisson, iyagoo diyaar u ah inay iska iibiyaan Thibaut Courtois, balse tartan adag kala kulmi karta qaar ka mid ah Kooxaha qaarada Yurub.
Qandaraaska Courtois ee garoonka Stamford Bridge ayaa dhacayaa sanad Ciyaareedka 2019-ka, hase ahaatee maamulka Kooxda Blues ayaa raba in bedelkiisa ay soo qaataan goolhayaha reer Brazil ee Alisson Becker.
Kooxaha Liverpool iyo Real Madrid ayaa isku dayaya inay la soo saxiixdaan goolhayaha reer Belgium iyo kooxda Chelsea Thibaut Courtois, kaas oo sidoo kale lala xiriirinayo Kooxdiisii hore ee Atletico Madrid.
The post Chelsea oo iska hilmaamaysa Thibaut Courtois, xilli ay u jihaysatay Alisson Becker appeared first on Wararka Ciyaaraha.
Algeria oo gacanta ku dhigtay 700 kg oo mukhaadaraad ah.
DEG DEG: Tababare Zidane Oo Ku Dhawaaqay Inuu Iskaga Tagay Kooxda Real Madrid, Maxay Tahay Sababta?…
Rasmi : liiska xidigaha xulka qaranka Germany ee koobka aduunka oo lagu dhawaaqay xili Leroy Sane laga reebay
Napoli Oo Soo Bandhigtay Qiimaha Ay Ku Iibineyso Xidigeeda Kalidou Koulibaly, Xili Hadalkan Uu Dhabar Jab Ku Yahay Kooxda Arsenal
Goolhayaha kooxda Barcelona Jasper Cillessen Oo Doonaya Inuu Ku Biiro Horyaalka Premier League